Nepal Deep | गर्भवती अवस्था सुगर भए कसरी केयर गर्ने ?
गर्भवती अवस्था सुगर भए कसरी केयर गर्ने ?
शुक्रबार, भाद्र ११ २०७८
काठमाडौँ। पछिल्लो केही दशकयता गलत जीवनशैली र खानपानका कारण गर्भवती महिलामा मधुमेह (सुगर)को समस्या देखिने गरेको छ ।
गर्भावस्थामा देखिने मधुमेहलाई जेस्तेसनल मधुमेह भनिन्छ । अधिकांश महिलामा यो मधुमेह सुत्केरी भइसकेपछि हराउने गर्छ । तर, गर्भवती भएको अवस्थामा हुने यो मधुमेहले बच्चाको स्वास्थ्यमा असर पार्छ ।
गर्भवती हुनुअघि नै महिलामा मधुमेह भएमा या गर्भवती भइसकेको अवस्थामा मधुमेह राम्रोसंग नियन्त्रणमा ल्याइएन भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । गर्भावस्थाका सुरुकै दिनहरूमा मधुमेह नियन्त्रित नभएमा शिशुको शारीरिक बनावटमा असर हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मधुमेहकै कारण विकलांग बच्चा जन्मिने खतरा हुन्छ । साथै यसले गर्भमा हुर्कदै गरेको बच्चाको मुटु, दिमाग र ढाडमा सीधै असर गर्न सक्छ ।
गर्भवती महिलामा मधुमेह लाग्दा गर्भपात हुने सम्भावना समेत बढेर जान्छ । गर्भावस्थाका पछिल्ला महिनाहरूमा शिशुलाई पोषण अत्यधिक बढी भएर शारीरिक तौल बढ्न पुग्छ । बच्चा सामान्यभन्दा बढी तौलको हुदा प्रसवकालमा चोटपटक लाग्ने, सामान्य तरिकाले जन्मिन नसकेर अप्रेसन गर्नुपर्ने तथा शिशुको मृत्यु नै हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
मधुमेह रोग लागेका महिलाको पेटमा भएको बच्चा जन्मिएपछि पनि मृत्यु हुन सक्ने खतरा रहन्छ । समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने सम्भावना बढी हुने भएकाले मृत्युको खतरा उच्च हुन्छ । जन्मिनेबित्तिकै नवजात शिशुमा चिनीको मात्रा धेरै घटेर कम्पन हुने वा बेहोस हुने हुन्छ ।
समग्रमा मधुमेहरोगी आमाको पेटमा रहेको बच्चालाई समेत यसले असर पार्दछ । त्यसैले गर्भवती महिलाले आफुलाई मधुमेह हुन नदिन सचेत बन्नु पर्दछ । अझ ३० वर्षभन्दा बढी उमेरका गर्भवती महिलालाई मधुमेहको खतरा बढी हुने भएकाले सजग हुन अत्यन्त आवश्यक छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा